အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:咽頭べさ - ဝစ်ရှင်နရီ
မင်္ဂလာပါ ကျွန်ပ်အမည်--咽頭べさ (ဆွေးနွေး) ၁၂:၅၇၊ ၂၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ (UTC)Intobesaဖြစ်ပါတယ် ဘယ်လိုအက္ခရာဖလှယ်ရပါသလဲသိရှိလိုပါ၏ ကျေးဇူးပြုပြီပြောပြပေးစေလိုပါ၏
Please be careful what you're writing in the summary of page creation. Your edit may be deleted if they are not in-line with the policy and guidelines of Wiktionary. This is notapersonal issue like you think. Ninja✮Strikers «☎» ၀၄:၀၄၊ ၂၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ (UTC)
Hi@Ninjastrikers:ဇော်ဂျီဖောင့်ကတရားဝင်ဖောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျွန်ပ်နာလည်းတယ်ဗျ နာမလည်းသေးတာခင်ဗျာ စဥ်စာကြည့်လေဗျာ ကျွန်ပ်ကဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ရေးတင်နေတာမဟုတ်ဘူး ယူနီကုဒ်ဖောင့်မှာမွန်အက္ခရာမမှန်ကန်မှုဖေါ်ပြပေးတာလေဗျာ ခင်ဗျာဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ပက်သက်တာလက်မခံစေချင်ရင်လက်ရှိသုံးနေတယ်ယူနီကုဒ်ဖောင့်မှာမွန်အက္ခရာမှန်ကန်မှု100%ဖြစ်အောင်အရင်လုပ်ပေးလေဗျာ မွန်အက္ခရာမှန်ကန်မှု100%ဖြစ်နေတာတောင် ကျွန်ပ်ကဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ပက်သက်တာ ဆက်တင်နေသေးရင်တော့ စည်းကမ်းချိုးဖောက်မှုနဲ့ခင်ဗျာအချိန်းမရွေး ကျွန်ပ်ကိုအရေးယူနိင်တယ် အခုကယူနီကုဒ်ဖောင့်မမှန်ကန်လို့ကျွန်ပ်တင်တာလေဗျာ ဒါလေတောင်ခင်ဗျာနာမလည်းဘူးလား ခင်ဗျာကိုခုခံပြောရင်လည်းဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် လုပ်လာဦးမယ် ခင်ဗျာဘက်ကမှန်နေရင် ကျွန်ပ်ဘက်ကခင်ဗျာကိုစကားလာများအကြောင်း ဘာမရှိဘူး ကျွန်ပ်စကားမှန်မမှန် ခင်ဗျာအဲ့အက္ခရာတွေ သေးခြားစစ်ဆေးကြည့်ပါဦးဗျာ
အဲ့အက္ခရာ၂ခုခင်ဗျာသေးသေးခြားခြားကြည့်နော် ဘယ်နေရာမှားနေလဲလို့ အမှားရှိလို့ လေ့လာသူများအတွက် အမှားမလေ့လာမိအောင်အက္ခရာနှစ်ခုယှဥ်ပြပေးထားလေဗျာ ဒီဝက်ဆိုဒ်လင့် ၁ ၂ ကိုလည်းခင်ဗျာဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ အက္ခရာအမှားများစွာ ခင်ဗျာစွာခင်ဗျာတွေ့ရလိမ့်မယ်--Music writer Dr.Intobesa of Japanese idol NMB48 and BNK48. (talk) ၀၈:၀၅၊ ၅ ဇွန် ၂၀၂၁ (UTC)
@咽頭べさ: ဒီနေရာ (ဝစ်ရှင်နရီ) ဟာ ဖောင့်ပြဿနာတွေ ထောက်ပြရှင်းပြရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဝစ်ရှင်နရီဟာ အဘိဓာန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဝေါဟာရတစ်ခုရဲ့ ရင်းမြစ်၊ ဖွင့်ဆိုချက် စတာတွေကို ရေးသားနိုင်ပေမယ့် ဖောင့်ပြဿနာကို တင်ပြရမယ့် နေရာမဟုတ်ပါဘူး။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၇:၄၄၊ ၅ ဇွန် ၂၀၂၁ (UTC)
@Ninjastrikers:ခင်ဗျာရဲ့ထင်မြင်တာတွေနဲ့ ကျွန်ပ်လုပ်နေတာတွေနဲ့တခြားစီပဲဗျ ကျွန်ပ်ကဖောင့်ပြဿနာတွေကိုထောက်ပြရှင်းပြနေတာမဟုတ်ဘူး အက္ခရာအမှားမလေ့လာမိအောင် ပြသပေးတာလေဗျာ ဝစ်ရှင်နရီကအဘိဓာန်ဆိုတာ ခင်ဗျာကျွန်ပ်ကိုပြောပြစရာမလိုပါဘူး ကျွန်ပ်ဝီကီမသုံးတတ်ကတည်းကသိပြီးသားပါ ကျွန်ပ်ဒီလိုလုပ်ရတာကလည်း မိမိလူမျိုးစာပေကာကွယ်သောအနေနဲ့ အက္ခရာအမှားပြသရှင်းပြပေးတာလေဗျာ ဒါလေတောင်ခင်ဗျာနားလည်မှု မပေးနိင်ဘူးလားဗျာ ကျွန်ပ်အက်မင်မဟုတ်တော့ မိမိလူမျိုးစာပေကာကွယ်ပိုင်ခွင့်လေကောခင်ဗျာမပေးနိင်ဘူးလား လက်ရှိခင်ဗျာလုပ်နေတာတွေက မွန်စာပေခေတ်မှီးတိုးတက်သွားမှာ ခင်ဗျာမနာလိုဖြစ်နေတယ်လို့ပဲကျွန်ပ်ထင်မြင်တယ် သက်သေများအနေနဲ့ကတော့မွန်ဝီကီနဲ့မွန်ဝစ်ရှင်နရီကိုသာကြည့် ဘာသာစကားမှာ မွန်စာနဲ့ဗမာစာရောနောနေတာပဲ ဒါခင်ဗျာလက်ချက်ပဲလို့ ကျွန်ပ်ထင်မြင်တယ် သျှာမ်းဝီကီနဲ့ဝစ်ရှင်နရီအက်မင်၂ယောက်ထဲနဲ့ တိုးတတ်ခေတ်မှီးနေတာတွေ့ရတယ် မွန်မှာလည်စာရောနှောမှုဖြေရှင်းဖို့မလုပ်တက်သေးတယ်ကျွန်ပ်ကိုယ်ကျွန်ပ်ပဲရှက်မိတယ်--Music writer Dr.Intobesa of Japanese idol NMB48 and BNK48. (talk) ၀၈:၂၆၊ ၆ ဇွန် ၂၀၂၁ (UTC)
@咽頭べさ: သေချာမလေ့လာ မသိဘဲ ရမ်းသမ်းစွပ်စွဲပြောဆိုတာမျိုး သိပ်မလုပ်ပါနဲ့။ Fallback font ဆိုတာဘာလဲ အရင်လေ့လာပါ။ မွန်ပရောဂျက်တွေရဲ့ Fallback font ဟာ ၁) ဗမာစာ၊ ၂) အင်္ဂလိပ်စာ အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတာ။ ဒါကြောင့် မွန်ဘာသာပြန်မလုပ်ထားတဲ့ စာတွေကို ဗမာစာနဲ့ပြတယ်။ အပေါ်မှာပြောတော့ ယူနီကုဒ်ဖောင့်မှာ အက္ခရာမမှန်တာပြတာမို့ မှန်အောင်လုပ်ပေးလို့ပြောတယ်။ အောက်မှာကျ ဖောင့်ပြဿနာထောက်ပြနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ ပြောတာ ရှေ့နောက်မညီပါလားဗျ။ ဝစ်ရှင်နရီဟာ အဘိဓာန်မို့ ဖောင့်ပြဿနာအဆင်မပြေတာ ရှင်းပြရေးပြနေရမယ့် နေရာမဟုတ်ဘူးလို့ ကျနော်ပြောပြီးသား။ ပရောဂျက်နဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ သွေဖီတဲ့ ရေးသားချက်၊ ဖော်ပြချက်တွေကို ရှင်းလင်းရမှာပဲဗျ။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၀:၅၁၊ ၆ ဇွန် ၂၀၂၁ (UTC)
@Ninjastrikers:ဟုတ်ပြီခင်ဗျာကို ကျွန်ပ်မေးမယ် ဗမာဝစ်ရှင်နရီမှာယူနီကုဒ်တိုင်းရင်းသားအက္ခရာအာလုံး ခင်ဗျာဘက်ကအသုံးပြုနေတယ် ကွန်ပျူတာပေါ်ဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းပေါ်ဖြစ်ဖြစ် အက္ခရာ100%.မှန်ကန်ကြောင်း Screenshot photoတစ်ပုံလောက် သက်သေအထောက်အထားအနေနဲ့ ခင်ဗျာပေးပို့နိင်မလား ခင်ဗျာဘက်ကအက္ခရာ100%.ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ကျွန်ပ်ဘက်ကမှားကြောင်း ဝန်ခံမယ် လက်တွေ့အနေနဲ့ဒီအက္ခရာ ဗ္ၜေံကို ခင်ဗျာကျွန်ပ်ကို Screenshotရိုက်ပြီးပေးပို့ပါ ခင်ဗျာပုံစံကစွပ်စွဲမယ်ဆိုလည် စွပ်စွဲချင်စရာဘဲလေ နေတကား ခင်ဗျာနဲ့ပဲပြသနာတတ်နေရတာကိုးဗျ ခင်ဗျာနားလည်ထားရမှာက ကျွန်ပ်ကခင်ဗျာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မဟုတ်ဘူး အင်တာနက်အာကိုးနဲ့အနိင်ကျင့်လို့ရချင်ရမယ် အပြင်မှာတော့မရဘူး ကျွန်ပ်ကလက်ငင်းဘဲ ကျွန်ပ်ကခင်ဗျာလို ဟိုးစည်းကမ်းဗန်းပြ ဒီစည်းကမ်းဗန်းပြပြီး မခြိမ်းခြောက်တတ်ဘူး ဒဲ့ပြောတတ်တာ ကျွန်ပ်တို့တိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့မူရင်ဗီဇဘဲ ပြသနာမရှိရင်ခင်ဗျာကိုကျွန်ပ်အနေနဲ့ အပိုးစကားလာပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူး အားလည်းမအားဘူး ကျွန်ပ်ချစ်တယ်ကျွန်ပ်လူမျိုးအတွက် ဝီကီပေါ်ဆက်လုပ်ရမယ်အလုပ်တွေအများကြီးရှိသေးတယ် ခင်ဗျာလခရချင်ရမယ် သူတပါးအလှူငွေရချင်လည်းရနိင်တယ် ကျွန်ပ်ဝီကီပေါ်လုပ်နေတာ ကိုယ့်လူမျိုးကိုချစ်လို့ ထမင်းစားချိန်းရောက်တာတောင် ထမင်းမစားပဲကြိုးကြိုးစားစားလုပ်နေတာ ပိုက်ဆံတပြားမှရတာမဟုတ်ဘူး အရေးထဲခင်ဗျာနဲ့ပြသနာတတ်သေး ကျွန်ပ်စကားကရှေ့နောက်မညီးတာ မဟုတ်ဘူး ခင်ဗျာလုပ်ပုံကတရားကိုမတရားတာ အက်မင်ဆိုပြီးနေတကားအက်မင်အာဏာပါဝါပြပြနေတာ တချိန်းတုန်းကကျွန်ပ်ခင်ဗျာကိုလေးစားခဲ့ပေမယ့် မွန်နဲ့ပက်သက်တယ်အရေးကြီးဖိုင်တွေ အဖျက်ခံရပြီးနောက်ပိုင် ခင်ဗျာအပေါ်ကျွန်ပ်ရဲ့လေးစားမှုတွေ အကုန်ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီး--Music writer Dr.Intobesa of Japanese idol NMB48 and BNK48. (talk) ၁၂:၀၅၊ ၆ ဇွန် ၂၀၂၁ (UTC)
@咽頭べさ: ဆောတီးပဲဗျ။ ဝစ်ရှင်နရီ/ဝီကီပီးဒီးယား ပရောဂျက်တွေက မည်သူမဆို အခမဲ့ ဝင်ရောက်ပြင်ဆင်နိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် သူ့သတ်မှတ်ချက်နဲ့ အညီ ဖြစ်မှပါ။ ပရောဂျက်တွေမှာ သက်ဆိုင်ရာ လိုက်နာရမယ့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ ရှိကြပါတယ်။ ကျနော်ဟာ မြန်မာ ဝစ်ရှင်နရီ/ဝီကီပီးဒီးယား အပါအဝင် ဝီကီမီဒီယာပရောဂျက်တွေမှာ ထိန်းသိမ်းရေးကို စေတနာ့ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ လုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြဿနာဖြစ်နိုင်တဲ့ အသုံးပြုသူတွေ၊ အမှားတွေလုပ်နေတဲ့ အသုံးပြုသူတွေကို စောင့်ကြည့်တာ၊ ပြန်လည်ပြင်ဆင်တာ၊ အသိပေးတာ စတာတွေက ကျနော်လုပ်ဆောင်နေကျ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေလုပ်နေတဲ့ ကျနော့ကို harassment လုပ်လို့ ဝီကီမီဒီယာ ကွန်မွန်းစ်နဲ့ အင်္ဂလိပ်ဝီကီမှာ ခင်များ တစ်ပတ်အပိတ်ခံခဲ့ရတာကို မှတ်မိဦးမယ်ထင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၅:၁၃၊ ၆ ဇွန် ၂၀၂၁ (UTC)
@Ninjastrikers:ကျွန်ပ်အကောင့်တစ်ပတ်အပိတ်ခံရကတည်းက ကျွန်ပ်သိနေပြီသာပါ ခင်ဗျာဂုဏ်ယူဝမ်းသာနေတယ်ဆိုတာ ဒီမှာထက်ပြီးခင်ဗျာပြောနေစရာမလိုဘူး ကျွန်ပ်ကခင်ဗျာထက်ဦးနှောက်ပိုကောင်းတယ် ခင်ဗျာထက်ဘာသာစကား၉မျိုးအထိပြောနိင်ရေးတယ် ဒါပေမယ့် ကိုယ့်မိခင်ဘာသာစကားမဟုတ်လို့ သတ်ပုံမှန်အောင်သိပ်မရေးနိင်တာ ကျွန်ပ်ရဲ့အားနည်းချက်ပဲ ခင်ဗျာတို့အဲ့လိုလုပ်လို့ကော ကျွန်ပ်ကကြောက်သွားမယ် ခင်ဗျာထင်နေလား မွေးကတည်းကကြောက်တတ်တယ်လူစာမဟုတ်ဘူး ခင်ဗျာတို့အဲ့လိုလုပ်လေပိုဆိုးလေပဲ ခင်ဗျာနဲ့ပြသနာတတ်လေကျွန်ပ်ကခင်ဗျာကိုပိုပိုမုန်းရလေပဲ ဒီဗမာဝီကီနဲ့ဝစ်ရှင်နရီတခြားအက်မင်တွေကို ကျွန်ပ်အနေနဲ့အပြစ်ပြောစရာဘာမရှိဘူး ပြသနာတတ်နေရတာခင်ဗျာတစ်ယောက်ထဲ ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်တော့ အရူးကိုဘုရင်မြှောက်ထားတော့ အရူးလုပ်သမျှပြည်သူလူထုတွေခံပေါ့ ပြန်ခုခံရင်လည်းကိုယ်ပဲနားမှာ အခုလည်းဒီလိုပဲ ကျွန်ပ်ကအက်မင်မဟုတ်တော့ ခင်ဗျာလုပ်သမျှကို ခံနေရယုံပေါ့ ဘယ်တတ်နိင်ပါမလဲ ခင်ဗျာကြောင့်ကျွန်ပ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းခံရင်တော့ မခြိမ်းခြောက်ဘူးနော် အဲ့ကျရင်ခင်ဗျာသတင်းသာနာထောင်းပေတော့ ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာ စဥ်စာကြည့်ပေတော့ လွန်းခဲ့တယ်၂၀၁၄ခုနှစ်တောင်ကိုးရီးယားမှာ ဘယ်ကျောင်းသားအဖွဲ့ကFacebookရုံးကို မီးရှို့ခဲ့လည်းဆိုတာ ၂၀၁၄ခုနှစ်ထုပ်ကိုးရီးယားသတင်းစာတွေတာ ခင်ဗျာရှာဖတ်ကြည့်ပေတော့ ခင်ဗျာကသာမှန်နေရင်ကျွန်ပ်အနေနဲ့ ပြောစရာဘာစရာဘာမရှိ ကျွန်ပ်နေတကားသိခံနေရအောင်ဘုရားမဟုတ်ဘူး ကျွန်ပ်တို့ရှင်းတိုဗုဒ္ဓဘာသာတွေက ခင်ဗျာတို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတွေလို အပြောကတမျိုးအလုပ်တာကတမျိုးတွေလိုမဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ကိုထိရင်ပျားလိုတုတ်မယ်အမျိုးဆိုတာခင်ဗျာမှတ်ထားပါ ခင်ဗျာကသာစေတနာဝန်ထမ်းလို့ ကိုယ့်ကိုဂုဏ်ယူပြောနေပါစေ ကျွန်ပ်ကတော့ ခင်ဗျာကိုစေတနာဝန်ထမ်းလိုမမြင်ဘူး ခင်ဗျာလုပ်သမျှ စေတနာကနဲနဲ ဝေဒနာကများများ ခင်ဗျာထက်ဝါရင့်တယ် အက်မင်တွေအများကြီး ကျွန်ပ်ကိုသူတို့ဘာမှ ဒုက္ခမပေးဘူး ဝီကီယခုလိုသုံးတတ်အောင် သူတို့ကသင်ပေလိုက်သေး ဒါမျိုးဆိုတော့ကျေးဇူးတင်လွန်းလို့ထိုင်ပါကန်တော့လိုက်ချင်တယ် ခင်ဗျာကကျွန်ပ်ကို အသုံးပြုနည်းမသင်ပေးတဲ့အပြင် ဟိုးအကြောင်းပြနဲ့ဒီအကြောင်းပြ အာဏာပါဝါပဲထုပ်သုံးနေဆက်ပြီးဆွေးနွေးစရာမလိုတော့ဘူး သဘောပေါက်နေပြီ ခင်ဗျာရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဘာလဲဆိုတာ--Music writer Dr.Intobesa of Japanese idol NMB48 and BNK48. (talk) ၁၆:၂၅၊ ၆ ဇွန် ၂၀၂၁ (UTC)
ကောင်းပါပြီ။ ကျနော်ပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေ (ဒီနေရာတင်မဟုတ်၊ အခြား ခင်များနဲ့ ပြောခဲ့တဲ့နေရာတိုင်း) မှာ ဝီကီပီးဒီးယား/ဝစ်ရှင်နရီ/ကွန်မွန်းစ်/ဝီကီမီဒီယာ ပရောဂျက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာ၊ ပြဿနာတွေကိုပဲ ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ပေမယ့် ခင်များကတော့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်တာ၊ အနှောက်အယှက်ပေးတာ၊ လူမျိုးရေးစွပ်စွဲတာတွေကလွဲပြီး ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကို ပြေလည်အောင်ပြောဆိုဆွေးနွေးတာမျိုး မရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့ နောက်ထပ်လဲ ဆက်ပြောလဲ ထူးမယ့်ပုံမပေါ်ပါဘူး။ ကျနော်ကတော့ ဝီကီပီးဒီးယား/ဝစ်ရှင်နရီ/ကွန်မွန်းစ်/ဝီကီမီဒီယာ မူဝါဒတွေအတိုင်း ဆက်လုပ်သွားရုံပါပဲ။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၆:၃၉၊ ၆ ဇွန် ၂၀၂၁ (UTC)
"https://my.wiktionary.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:咽頭べさ&oldid=847427" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၆ ဇွန် ၂၀၂၁၊ ၁၆:၃၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။